Nbudata Boeing iFly 747-400 V1.1.0.0 FSX & P3D - Rikoooo
downloads 91 450
iFly Team, ụda site Steven Persson
13 / 11 / 2013: Ugbu a na-akwado P3D, mgbanwe nke 2D panel ma gbakwunye ụda ọhụrụ dị adị maka B747-400.
Nke a bụ Boeing 747-400 nke a na-eche kemgbe FSX na P3D siri ike ịme anwansị. Ihe omimi zuru oke banyere FMC zuru oke. TCAS nwere usoro ihe omumu TA na RA nke zuru oke. Sistemụ Ntụgharị 90% nke bọtịnụ 3D zuru oke na ọnọdụ VC. Ihe nhazi 3 maka ịrụ ọrụ ka mma. Na-agụnye ihe ndozi asaa na Ikuku France.
DỊ MKPA: Gịnị ma ọ bụrụ na VC gauges bụ nwa? -amalite site na ịga na 2D Panel ahụ na-aga virtual kokpiiti mode (VC), nke a dị mfe ọrụ ga rụọ ọrụ gauges. Ọ bụrụ na nke a adịghị aka, jide n'aka na ị rụnyere FSUIPC4 dị ka-atụ aro ndị installer.
Onye edemede: iFly Team, ụda site Steven Persson